बीपी राजमार्गमा यस्तो यन्त्र जडान गरिदैँ ! | suryakhabar.com
Home पत्रपत्रिका बीपी राजमार्गमा यस्तो यन्त्र जडान गरिदैँ !
on: ७ असार २०७५, बिहीबार ०६:४१ In: पत्रपत्रिकाTags: No Comments
काठमाडौं । बीपी राजमार्गमा सवारी भार मापन यन्त्र जडान हुने भएको छ । साँघुरो, घुमाउरो सडकमा मापदण्ड भन्दा विपरीत सवारीसाधनले ओभरलोड बोक्न थालेपछि सरकारले सवारी भार मापन यन्त्र जडानको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
जाइकाले दिएको रिपोर्टअनुसार सवारीको वजनसहित यस राजमार्गमा १६ टनभन्दा माथिको सवारीसाधन सञ्चालन गर्न मिल्दैन । अहिले सर्वोच्च अदालतले १० टनभन्दा माथिको सवारीसाधन सञ्चालन नगर्न अन्तरिम आदेश दिए पनि २० टनसम्मका सवारीसाधन निर्वाध रुपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । सरकारले मापदण्ड लागू गरेपछि कुन सवारी साधनले कति भार बोक्छन् भन्ने मापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन् ।
७ असार २०७५, बिहीबार ०६:४१